प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले भन्यो : डा. केसीका माग पूरा गर्न ढिलाइ गर्ने गम्भीर भूल नगरियोस्- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता टोलीसम्म गठन नगरेर बालहठ देखाएको बताएको छ ।
डा. केसीका माग पूरा गर्न ढिलाइ गरेमा गम्भीर भूल हुने उसको भनाइ छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि कदम चाल्न भनेका छन् । 'डा. केसीको स्वास्थ स्थिति जटिल बन्दै गएको छ । वार्ता नगर्ने बालुवाटारको बालहठ यहाँलाई महँगो पर्नेछ, प्रधानमन्त्रीज्यू । हेक्का रहोस् लोकतन्त्र भर्सेस ‘कम्युनिस्टतन्त्र’ मा अन्ततः जित लोकतन्त्रकै हुनेछ । डा. केसीको जायज आवाजलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्ने गम्भीर भूल किमार्थ नगरियोस् ,' प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा र कोरोना संक्रमितको उपचारका मुद्दालाई समाधान गर्नुपर्ने मागसहित २४ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. केसीसँग छलफल गर्न वार्ता टोलीसम्म गठन नगरिनु गम्भीर भएको कांग्रेसको भनाइ छ । 'अनशनजस्तो शान्तिपूर्ण सत्याग्रहलाई समेत सुन्न अस्वीकार्य गर्दै हुनुहुन्छ । खुल्ला ढंगले के यो सन्देश दिन चाहनु भएको हो कि— लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुमा फरक हुन्छ ?,' कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेको छ ।
कांग्रेसका नेताहरू सरकार प्रमुख रहेका बेलामा डा. केसीका माग पूरा गरिएको दाबी गर्दै प्रवक्ता शर्माले लेखेका छन्, 'नेपाली कांग्रेसको पालामा डा. केसी अनशन बस्दा, वार्ता गरिए, कयौं माग पूरा गरिए । चाहे सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उच्च स्तरीय कार्यदल बनाएर होस् या शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेर होस, संवाद मार्फत उहाँका माग पूरा गरिए ।'
डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको अवस्थामा सरकारमाथि उनका माग पूरा गर्न दबाब बढिरहेको छ । सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाले भने अनशन अन्त्य गर्नका लागि डा. केसीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ १४:४६
सडक मर्मतको ठेक्का तोडियो
आश्विन २१, २०७७ हरि गौतम
रुकुम पश्चिम — सम्झौताअनुसार काम नभएपछि चौरजहारी नगरपालिकाले सडक मर्मतको जिम्मा पाएका ठेकेदारसँग सम्झौता तोडेको छ । नगरपालिकाले वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका सडकको मर्मतका लागि २ ठेक्का खोलेको थियो ।
तर तोकिएको समयभित्र र सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै ठेक्का तोडिएको हो । नगरपालिकाले दुवै ठेक्काको जिम्मा एचबी इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई दिएको थियो । ४० लाख रुपैयाँमा खोलिएका दुवै ठेक्का कम्पनीले झण्डै ५० प्रतिशत घटेर लिएको थियो ।
नगरपालिका र कम्पनीबीच ७ दिनमा काम सक्ने गरी गत असोज ८ गते सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको आग्रहअनुसार थप ३ दिनको म्याद थप्दा पनि काम हुन नसकेपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीको सिफारिसमा ठेक्का तोडिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताए । सम्झौता रद्द भएसँगै उक्त काम नगरपालिका आफैले सुरु गरेको उनको भनाइ छ । दसैंअघि नै बाढी–पहिरोले क्षति पुर्‍याएका सबै सडक मर्मत गरिसक्ने नगरपालिकाको योजना छ ।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले २ सय ७० किलोमिटर सडकको ८४ हजार घनमिटर माटो हटाउनुपर्ने थियो । मंगलबार प्राविधिकसहित राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेलगायतको टोलीले सडकको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनपछि टोलीले सम्झौता अनुसारको काम नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । मर्मत तथा सफाइ गरिएको भनिएको चिप्लेटीदेखि नार्जि, मलामेडाँडा, सिलिंगी र भुरुङखोला सडकमा कामै नभएको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार स्टामेटअनुसार काम नभएको, खाल्डाखुल्डी नपुरेको र पहिरो नहटाएको पाइएपछि कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ १४:३७